နယ်သာလန်ရှိနိုင်ငံတကာကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများ - Law & More
ထိရောက်သောဥပဒေနှင့်အညီကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ LAW & MORE
CORPORATE LAW LAWYERS ၏ရွေးချယ်ပါ LAW & MORE
သို့ +၃၁၄၀၃၆၉၀၆၈၀ သို့ခေါ်ပါ
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါကမင်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနဲ့စနေပြီ။ မင်းမင်းကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုပုံစံတည်ဆောက်မလဲ၊ ဘယ်ပုံစံကသင့်တော်မလဲ။ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ရှယ်ယာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ မှန်ကန်သောစာချုပ်များကိုလည်းချုပ်ဆိုရပါမည်။ မင်းမှာတည်ထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပြီလား။ ထိုအခြေအနေတွင်မင်းကုမ္ပဏီကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေနှင့်လည်းရင်ဆိုင်ရမည်မှာသေချာသည်။ နောက်ဆုံးတော့တရား ၀ င်ကဏ္aspectsများသည်ကုမ္ပဏီအတွင်းအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္မှအမြဲပါ ၀ င်သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီအတွင်း၌များစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းသို့မဟုတ်အခြေအနေများသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကွဲပြားသောဥပဒေရေးရာပုံစံတစ်ခုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွင်းရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်များအကြားအငြင်းပွားမှုများကိုသင်ကိုင်တွယ်ရပေမည်။ ထို့အပြင်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း (သို့) ၀ ယ်ခြင်းသည်လည်းပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်သည်။ မည်သည့်တရား ၀ င်ပုံစံကိုသင်ရွေးချယ်သနည်း၊ အငြင်းပွားမှုများကိုဥပဒေအဆင့်တွင်မည်သို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းသနည်း။ ဥပမာအားဖြင့်စာချုပ်များရပ်စဲသင့်သလား၊ စာချုပ်အသစ်များချုပ်ဆိုသင့်သလား။
ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ၏နယ်ပယ်၌သင်၏မေးခွန်းအားလုံးနှင့်အတူမင်းထံမှကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေတစ် ဦး နှင့်မှန်ကန်သောနေရာကိုရောက်လာပြီ Law & More။ တွင် Law & More စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အနေနှင့်သင်သည်ဥပဒေရေးရာကိစ္စများနှင့်မဆိုင်ဘဲစွန့် ဦး တီထွင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်စိတ်ကူးများတီထွင်ရန်လိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းမှရှေ့နေတစ် ဦး Law & More မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို ဦး တည်နေတယ်၊ ​​မင်းလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင်၊ မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေကိုဂရုစိုက်နိုင်တယ်။ Law & Moreရှေ့နေများသည်ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေနယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြပြီးသင်ကုမ္ပဏီစတင်ဖျက်သိမ်းချိန်အထိဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်များပေးနိုင်သည်။ ဥပဒေကိုလက်တွေ့ကျကျအသုံး ၀ င်တဲ့ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်လို့မင်းငါတို့ရဲ့အကြံဥာဏ်ကနေတကယ်အကျိုးရှိမှာပါ။ လိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်သင်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအားမည်သည့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်မဆိုကူညီရန် ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မည်။ တိုတိုပြောရရင်, Law & More အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက်သင့်အားဥပဒေအရကူညီနိုင်သည်။
•ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းများ၊
သင်ဟာကော်ပိုရိတ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်နေသလား။ ကျေးဇူးပြု ထိတှေ့ Law & Moreငါတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေကမင်းကိုကူညီဖို့ ၀ မ်းသာလိမ့်မယ်။
"Law & More ပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့်၎င်း၏ client ကိုရဲ့ပြproblemsနာများနှင့်အတူစာနာနိုင်ပါတယ်။
ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရှေ့နေများ Law & More အောက်ပါနည်းလမ်းကိုသုံးပါ။
1. အသိအကျွမ်း။ ဘာအကြောင်းလဲသိချင်ပါတယ် Law & More မင်းနဲ့မင်းကုမ္ပဏီအတွက်လုပ်နိုင်လား။ ကျေးဇူးပြု။ ဆက်သွယ်ပါ Law & More။ သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသင်၏မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများအားတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်တင်ပြနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိလျှင်သူတို့သည်သင့်အတွက်ရက်ချိန်းယူရန်စီစဉ်လိမ့်မည် Law & More ရုံး။
၂။ အဆင့်ဆင့်အစီအစဉ်ကိုဆွေးနွေးပါ။ ရုံးမှာချိန်းထားတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကမင်းကိုပိုသိလာလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့မေးခွန်းရဲ့နောက်ခံအကြောင်းနဲ့မင်းကုမ္ပဏီရဲ့တရား ၀ င်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေတွေကဘာလဲဆိုတာကိုငါတို့ဆွေးနွေးမယ်။ ၏ရှေ့နေများ Law & More သူတို့ကမင်းအတွက်ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာဖော်ပြပြီးနောက်လာမယ့်ခြေလှမ်းတွေကမင်းဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုထောက်ပြပါ။
၃။ အဆင့်ဆင့်အစီအစဉ်ဆွဲပါ။ သင်ညွှန်ကြားသည့်အခါ Law & More သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စာချုပ်တစ်ခုရေးဆွဲလိမ့်မည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည်သင်နှင့်ယခင်ကဆွေးနွေးခဲ့သောအစီအစဉ်များကိုဖော်ပြသည်။ သင်၏တာဝန်ကိုများသောအားဖြင့်သင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရခဲ့သောရှေ့နေကဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
4. ကိုင်တွယ်ခြင်းကိစ္စ။ မင်းရဲ့အမှုကိုကိုင်တွယ်တဲ့နည်းလမ်းကမင်းရဲ့ဥပဒေရေးရာမေးခွန်းပေါ်မူတည်တယ်၊ ဥပမာ၊ အကြံဥာဏ်တွေဆွဲတာ၊ စာချုပ်ကိုအကဲဖြတ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုတာတွေကိုဆက်စပ်နိုင်တယ်။ မှာ Law & More၀ ယ်သူတိုင်းနှင့်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကွဲပြားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စမဆိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းရန်အမြဲကြိုးစားကြသည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်လိုလျှင်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်တရားဝင်ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်။ မင်းမှာဥပဓိရုပ်မပါဘဲနဲ့တရားဝင်ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးနိုင်တယ်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏တရား ၀ င်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဆုံးဖြတ်သည်။
ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရှေ့နေကတရား ၀ င်ပုံစံကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်
သင်သည်ဥပဓိရုပ်နှင့်တရားဝင်ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏ကုမ္ပဏီသည်သဘာဝလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့လွတ်လပ်စွာတရား ၀ င်ရောင်းဝယ်မှုများတွင်လွတ်လပ်စွာပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သဘောတူညီချက်များကိုကောက်ချက်ချနိုင်သည်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အကြွေးများရှိနေပြီးတာဝန်ကျေနိုင်သည်။
ဥပဒေရေးရာစရိုက်လက္ခဏာရှိသောတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဥပမာများသည်
BV နှင့် NV တို့ကိုမကြာခဏစီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်သုံးသည်။ မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီမှာပိုစံပြပန်းတိုင်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ BV သို့မဟုတ် NV တွင်ရှယ်ယာရှင်များကိုဆွဲဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ကုမ္ပဏီ၏တစ် ဦး တည်းသောရှယ်ယာရှင်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်၌အထက်ပါဖော်ပြထားသောတရား ၀ င်ပုံစံများအကြောင်းသင်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိလျှင်ဤဆက်ဆံရေးကိုမှန်ကန်စွာမှတ်တမ်းတင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ခုရှိသည်မှာပညာရှိဖြစ်သည် ရှယ်ယာရှင်များသဘောတူညီချက် ဤအတွက်ရေးဆွဲထားသည်။ Law & Moreအစုရှယ်ယာရှင်များရဲ့သဘောတူညီမှုကိုသင်ရေးဆွဲရန်သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်အဖြစ်တရားဝင်ဥပဓိရုပ်မပါသောတရားဝင်ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတရား ၀ င်ပုံစံများနှင့်ဥပမာအားဖြင့်မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်တွင်ချမှတ်ထားသောမိတ်ဖက်များသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်များအကြားကောင်းမွန်သောသဘောတူညီချက်များပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ တရား ၀ င်ပုံစံရွေးချယ်မှုသည်ငွေကြေးနှင့်တာဝန်ယူမှုကဲ့သို့ကိစ္စရပ်များအပေါ်တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဥပဓိရုပ်မပါသောတရားဝင်ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏ကုမ္ပဏီသည်တရား ၀ င်အရောင်းအဝယ်များတွင်လွတ်လပ်စွာမပါဝင်နိုင်ပါ၊ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ကုမ္ပဏီမှပေးသောအကြွေးများအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်တာဝန်ရှိသည်။
•တစ် ဦး တည်းပိုင်လုပ်ငန်း
Law & Moreကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများသည်သင်မှန်ကန်သောတရား ၀ င်ပုံစံကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ Law & Moreသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောတရား ၀ င်ပုံစံကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများသည်သင်နှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ လိုချင်သောတရား ၀ င်ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပြီးသောအခါကုမ္ပဏီသည်ကုန်သည်များနှင့်တည်ထောင်ပြီးမှတ်ပုံတင်ရမည်။ Law & More မင်းအတွက်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုညှိနှိုင်းပါ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်သင်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ဥပဒေရေးရာကဏ္aspectsများသည်လည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါဝင်ကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံရေးမ ၀ င်မီလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များပေးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိသောသဘောတူညီချက်ကိုရေးဆွဲရန်အကြံပြုသည်။ သဘောတူညီချက်တစ်ခုတွင်ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်ပေးသွင်းသူများနှင့်သဘောတူညီချက်များအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ယေဘူယျစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုရေးဆွဲခြင်းသည်ဤအချက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရှေ့နေများ Law & More သင်သည်အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်မကြုံတွေ့ရစေရန်သင့်အတွက်စာချုပ်များနှင့်ယေဘူယျစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုရေးဆွဲအကဲဖြတ်နိုင်သည်။
တရား ၀ င်နယ်ပယ်ရှိအရာအားလုံးကိုမင်းရဲ့ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာစနစ်တကျစီစဉ်ပေးရင်တောင်မှလက်တွဲမပူးပေါင်းချင်ဘူး၊ သူ့ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။ ဖောက်သည်များ (သို့) ပေးသွင်းသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးမပျက်စီးစေရန်ပထမ ဦး စွာချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရရန်အကြံပြုသည်။ တစ် ဦး Law & More ရှေ့နေများသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ သို့သော်လည်းအငြင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းရန်မဖြစ်နိုင်လျှင်ဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ Law & More ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေတွင်တရား ၀ င်တရားစွဲဆိုမှုများတွင်ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံရှိပြီးမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်တစ်ခုရရှိရန်သူလုပ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေအရဖြစ်ပေါ်သောစာချုပ်စာတမ်းများတွင်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည် Law & More အကြောင်းမေးခွန်းများနှင့်
မင်းကုမ္ပဏီကိုကြီးပွားစေချင်တာဥပမာ၊ မင်းကုမ္ပဏီကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပေါင်းဖို့မင်းစီစဉ်နေလား။ ထို့နောက်ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းရန်နည်းလမ်းသုံးမျိုးရှိသည်။
သင်၏ပေါင်းစည်းမှုသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်၊ သင်၏သီးခြားအခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရှေ့နေသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရှေ့နေထံမှ Law & More ဒီအကြောင်းမင်းကိုအကြံပေးနိုင်တယ်။
အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကမင်းကုမ္ပဏီကိုစိတ်ဝင်စားပြီးမင်းကုမ္ပဏီကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းဖို့ကမ်းလှမ်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင် ၀ ယ်ယူမှုအပေါ်အကောင်းမြင်ပြီးစီးပွားရေးလွှဲပြောင်းရန်စဉ်းစားနေသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ကြိုတင်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းတို့ကိုပံ့ပိုးနိုင်သည်။ မဟုတ်ရင်ဒါဟာရန်လိုတဲ့အာဏာသိမ်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏အစုရှယ်ယာများရောင်းချခြင်းနှင့်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမရှိပါကရန်လိုသောအာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသည်။ မင်းကုမ္ပဏီကဒါကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်လဲဆိုတာငါတို့သိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာမင်းကိုဥပဒေရေးရာအကူအညီတွေပေးနိုင်တယ်။
ဖြည့်စွက်ကာ, Law & More သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ၀ င်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်ပါကသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ၀ ယ်သောအခါသင်လုံ့လဝီရိယရှိစွာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ပေါင်းစည်းခြင်း (သို့) ၀ ယ်ယူခြင်းအကြောင်းကောင်းစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်လိုချင်သည်။ သင်ဤအကြောင်းပိုမိုသိလိုသလား။ Law & Moreကုမ္ပဏီရှေ့နေများသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနှင့်၊ သင်၏ဈေးကွက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းရန်သင်ရည်ရွယ်ထားသလား။ ဒါမှမဟုတ်စျေးကွက်သစ်တစ်ခုကို ၀ င်ဖို့စီစဉ်နေတာလား။ သင်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအကြံပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံများသည်သင့်လျော်သည့်ပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ကြည့်နိုင်သည်။ သင်ဤအကြောင်းပိုမိုသိလိုသလား။ ကျေးဇူးပြု ထိတှေ့ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရှေ့နေများ Law & More.
ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေသည်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဥပဒေနှင့်ဒတ်ခ်ျပုဂ္ဂလိကဥပဒေတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေသည်တရား ၀ င်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ကုမ္ပဏီဥပဒေတို့ကိုထပ်မံခွဲခြားထားသည်။ ကုမ္ပဏီဥပဒေသည်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဥပဒေထက်များစွာကန့်သတ်ထားပြီးအောက်ပါဥပဒေပုံစံများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းဥပဒေသည် BV တစ်ခုနှင့် NV အပါအဝင်ဥပဒေပုံစံအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည် Law & Moreကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများသည်သင်မှန်ကန်သောတရား ၀ င်ပုံစံကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ Law & Moreသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောတရား ၀ င်ပုံစံကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများသည်သင်နှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ဖြည့်စွက်ကာ, Law & More မင်းကိုကူညီနိုင်တယ်။
သင်ဟာဥပဒေပြသနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား၊ အဲဒါကိုမင်းမြင်ချင်လား။ ထို့နောက်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ မည်သည့်တရား ၀ င်ပြသနာသည်သင့်ကုမ္ပဏီကိုအဓိကငွေကြေး၊ ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အရေးမပါသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ မှာ Law & Moreဥပဒေရေးရာပြဿနာမှန်သမျှသည်အလွန်များပြားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်။ အဲဒါကြောင့် Law & More ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့်တိကျသောဥပဒေရေးရာဗဟုသုတများ၊ မြန်ဆန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်မှုတို့အပြင်သင့်အားကမ်းလှမ်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေနယ်ပယ်၌ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ Law & More စက်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လက်လီစသည့်ကဏ္ various အသီးသီးမှစွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်။
မင်းဘာသိချင်လဲ Law & More Eindhoven ရှိဥပဒေကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနှင့်သင့်အတွက်လုပ်နိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြု။ ဆက်သွယ်ပါ Law & Moreငါတို့ရှေ့နေတွေမင်းကိုကူညီဖို့ ၀ မ်းသာလိမ့်မယ်။ သင်ရက်ချိန်းယူနိုင်သည်။
•ဖုန်း-၀၄၀-၃၆၉၀၆၈၀ သို့မဟုတ် ၀၂၀-၃၆၉၇၁၂၁
• အီးမေးလ်ဖြင့်: info@lawandmore.nl
•မှတဆင့် Law & More စာမျက်နှာ: https://lawandmore.eu/cellment/
အများအားဖြင့်သဘောတူညီချက်သည်ပါတီများအတွက်အကျိုးဆက်များသာရှိသည်။ သဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သောတတိယအဖွဲ့များအနေနှင့်မူအရမည်သည့်အခွင့်အရေးနှင့်ဝတ္တရားများကိုမှရယူနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်သဘောတူညီချက်များနှင့်သဘောတူညီချက်များပါ ၀ င်မှုများသည်တတိယပါတီအကျိုးသက်ရောက်မှုများဟုလည်းရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ သဘောတူညီချက်တစ်ခုတွင်အပိုဒ်၏တတိယပါတီအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်နှစ်ခုရှိသည်။
၁။ စာချုပ်၌တတိယပုဂ္ဂိုလ်သည်စာချုပ်ပါ ၀ င်သူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတောင်းခံနိုင်သည် (သို့) ၎င်းတို့အနက်မှတစ် ဦး ဦး အားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအပိုဒ်ပါ ၀ င်သည်။
၂။ တတိယပါတီသည်အခြားပါတီနှစ်ခုပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ထံသို့တင်ပြသောကြေညာချက်အားဖြင့်အပိုဒ်ကိုလက်ခံလိုက်သည်။
အထက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံပါကသဘောတူညီချက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤတတိယအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်သောသဘောတူညီချက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ သဘောတူညီချက်များ၏တတိယပါတီအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသောအယူဝါဒတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်စာချုပ်စာတမ်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ တတိယပါတီသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပြု။ ဆက်သွယ်ပါ Law & Moreမရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရှေ့နေများသည်သင့်ကိုကူညီရန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂလိကအကန့်အသတ်ကုမ္ပဏီ (BV) နှင့်အများပိုင်အကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများ (NV) အတွင်း၌အမြင့်ဆုံးအာဏာသည်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်များ (AvA) တွင်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအနည်းဆုံးကုမ္ပဏီအတွင်းအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုများသောအားဖြင့်ရှယ်ယာရှင်များ (AvA) မှယူလေ့ရှိသည်။ စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းကုမ္ပဏီမှာအစုရှယ်ယာရှင်တွေအကြားအငြင်းပွားမှုတွေကိုသုံးလို့မရဘူး။ အဲ့ဒီမှာငါတို့နားလည်တယ် Law & Moreမရ။ ဒါကြောင့်အစုရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းပေါင်းများစွာကိုတိုတိုရှင်းပြပါ။
•ဖျန်ဖြေခြင်း။ သင်၏ကုမ္ပဏီအတွင်းရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်အများအားဖြင့်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုသည်မင်းကုမ္ပဏီရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းကိုမြန်မြန်ပြန်စနိုင်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ ၎င်းသည် လွတ်လပ်၍ ဘက်မလိုက်သောဖျန်ဖြေသူ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုသည်တရားစွဲဆိုမှုထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးစျေးသက်သာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာ၌ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းသင်ရှာနိုင်သည်။
•ဥပဒေရေးရာအငြင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းခြင်း။ အစုရှယ်ယာရှင်များရဲ့သဘောတူညီချက်များဟာအစုရှယ်ယာရှင်များရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အစုရှယ်ယာရှင်များရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်နိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေတွင်ဤကဲ့သို့သောအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနည်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ အသင်းအဖွဲ့များသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်တွင်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအစီအစဉ်မပါရှိလျှင်၊ သင်ပြဌာန်းထားသောအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာနိုင်သည်။ ထုတ်ပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရနိုင်ခြေအကြားဤနေရာတွင်ခြားနားချက်တစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုစလုံးအတွက်သင်အားထုတ်ပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ကြောင်းအထောက်အထားများနှင့်တကွတရားသူကြီးကိုစည်းရုံးရမည်။ ဒီရွေးချယ်မှုတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ မင်းရဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲဒါတွေကိုသုံးနိုင်လားဆိုတာမင်းသိချင်သလား။ ကျေးဇူးပြု။ ဆက်သွယ်ပါ Law & Moreမရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးရန်ပျော်ရွှင်သည်။
•စစ်တမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ Amsterdam အယူခံတရားရုံးရှိ Enterprise Chamber ၌ပြုလုပ်သောဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အစုရှယ်ယာရှင်များအပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီအတွင်းကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းကဏ္ Section သည်ကုမ္ပဏီအားစုံစမ်းရန်နှင့်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရန်ဥပမာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုယာယီရပ်ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ရလဒ်ကိုအစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုလွဲမှားခြင်းရှိလျှင်လုပ်ငန်းကဏ္ Section သည်ကျယ်ပြန့်သောလုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်ထိုကိစ္စတွင်သင်ကုမ္ပဏီအားဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာအစုရှယ်ယာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အငြင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသိချင်သလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကော်ပိုရိတ်ရှေ့နေများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Law & Moreမရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်သင့်အားအကြံဥာဏ်များပေးရန်နှင့်လိုအပ်ပါကဖြန်ဖြေရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးပါသည်။